Artur Viktorovich Vaha - ifilimu kanye yaseshashalazini umlingisi, Umculi ahlonishwe of the Russian Federation. Colorful, uyathandeka, hhayi ezintekenteke - ke nje-ke ungayididanisi ubani. Uyabathanda umsebenzi wakhe futhi othanda ukuphila; hhayi nokujaha impumelelo, kodwa musa ukubaleka. Uhlala ukuzijabulisa nokuzama ukuthi amthathe ekonke ukuphila. umculi Free, "ubudala" RocknRolla futhi ezingelapheki romantic - imininingwane yomlando wakhe nemsebenti wekuticambela Funda kabanzi ku-athikili yethu.
igama UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki kukamama
Arthur Waha - ongowokuzalwa Petersburg. Wazalwa emkhayeni waseshashalazini (lokhu kwenzeka ngo-January 1964) futhi lakhula ukubuyisa - walithanda hooliganism futhi zilethwe abathandekayo babo asemrarweni.
Umama umculi Will V Wach, ukwakheka kuqala - umklami. Mangisho ukuthi owesifazane lo msebenzi uye wathuthuka abanye - e Tallinn wonke ikota, elaklanywa wakhe. Nokho, ukwenza ibhizinisi umsebenzi zonke izinsuku zokuphila kwakhe V Will not. Ngesinye isikhathi esededelwe, yena umxhwele yaseshashalazini kanye lanquma ukuqhubeka yaseshashalazini oqondisa.
By the way, negama layo engavamile ihlobene indaba ezithakazelisayo. Owesifazane kusukela Ukraine, wazalelwa emzini Krivoy rog. Uma emaphethelweni esigodi Ngahlala ekamu lwamaGypsy, futhi phakathi kwabo kwaba lwamaGypsy uyaziqhenya futhi inkululeko abathanda okuthiwa uWill - yena, ihlabelela, idansa umxhwele ubuhle bayo. Le ntombazane ebona izakhamuzi eziningi. Umama Will V - ugogo u-Arthur Wahi - futhi waba ngaphansi kwethonya romantic lwamaGypsy abantu futhi wanquma ukunikeza indodakazi yakhe igama lwamaGypsy.
Kunzima ukusho ukuthi igama engavamile ukuthonywa isiphetho abesifazane. Nokho, ukuphila wayehlala kuyathakazelisa ukuthi wayehlale sizungezwe abantu ezihlakaniphile - abalingisi, abaculi. Endlini yakhe ngokuvamile bahlangana Bohemians.
Ubaba Arthur Viktorovich - Viktor Andreevich Vaha - ezula umlingisi ngaphandle imfundo ekhethekile, kodwa njengoba Arthur yena acabanga ukuthi ingumphathi abahlakaniphe kakhulu. Victor Waha wabashiya lapho eneminyaka engu-ezintathu - kusukela amadoda musa ukuxhumana, nobaba umlingisi enolwazi oluncane kakhulu.
Waha nesibongo sivela uhlobo Estonia lasendulo. Wayithola iqhawe lethu ku ifa kanye baba nomsizi wakhe othembekile empilweni - Arthur akuvamile eyabizwa ngamagama, igama lakhe ngokuvamile iwubufakazi nje Vaha.
Njengoba ingxube kuqhume zofuzo, u-Artur Viktorovich Vaha, cishe akunakwenzeka ukuthi abakhethiwe inkambo ehlukile, kodwa ukuba abe umlingisi. Ngiseyingane, yena Yiqiniso, abacabanga ngekusasa. Ngesinye isikhathi, ngase ngiya faka esikoleni sobudokotela ukuba abe udokotela ohlinzayo. Kodwa kwaba zonke izinto ezingasho lutho, futhi le nsizwa nginomuzwa enhliziyweni yami ukuthi uzoba umculi - Isiphelo sakhe kwaba cishe uphawu. Njengoba yena laughingly uzwakalise kumdlali, akhe "itheleleke" njengoba ingane. Nakuba isiphetho imibuthano amadlingozi futhi esikoleni umfana amateur phezu, Isimanga siwukuthi. Ukulingisa umsebenzi baqala ekuseni kakhulu futhi, njengoba ngokuvamile kwenzeka, ngengozi.
Njengoba ngifika esigabeni ...
Lapho Arturu Vahe yayineminyaka eyisithupha ubudala, he was fike of kolungiselela play in the yaseshashalazini Leningrad City Council, lapho unina ngenkathi yena wamabhuku umsizi Igor Petrovich Vladimirov, umqondisi omkhulu we-nkundla. Ingane Wayemane akekho ukushiya indlu, futhi lona wesifazane waya yaseshashalazini - umfana buthule ukudlala ekhoneni eduze izigcawu.
Phakathi ukuprakthiza umqondisi wanquma ukuthi esikhathini esithile isenzo enkundleni kufanele ubone ingane. Wabamba iso Arthur, futhi indoda okuthiwa ingane kuye. ngokushesha Arthur wayiqondisa futhi lokho futhi kanjani, kanti umfana akazange alahlekelwe. Ukukhumbula ukuthi kunjalo namhlanje, umlingisi wathi uma konke okwenzekayo okwabonakala kuye abanye angenanhlonipho, yena wayengazi ukuthi ngempela kwenzekani. Nokho, ethanda ukudlala esiteji, futhi indima yakhe encane Arthur Waha kwenziwe kuze kube engu-nambili. Abadala nozakwethu esiteji ngokushesha waphawula ithalente womfana. By the way, IBamba elangenza uthanda ukuthi izingane nezilwane akunakwenzeka ukushaya. On ngokwethembeka wathola kanye nezimali nesizotha Arthur kungenzeka ngezinye izikhathi aphathe abendlu yabo nabo ice cream.
Kuyaphawuleka ukuthi ngo-DEBUT ukusebenza kwakhe Wahi ukudlala abadlali abadumile, phakathi kwawo kwakukhona Alisa Brunovna Freyndlih. Wayebe sabe sesigxila eSimisweni umfana abanamakhono. Ngemva kweminyaka eminingi, Waha wahlanganiswa actress. Kwathi LGITMiK ukuhlolwa isimo - Alisa Brunovna kwaba ilunga lekomidi luhlolo.
umsebenzi wakhe u-Arthur Viktorovich Waha yaqala ukusebenza e-Comedy Theatre owavela emva kokuphela Theatre Institute. The guy ngokuthi futhi wamema-inthavyu, imiphumela okuyinto wayemuhle ku qembu. Nokho, umlingisi yaqala ukusebenza ngesikhathi esisodwa - ekuqaleni waze wanikela duty Homeland futhi waba yisosha. By endleleni, it is basakaza Waha kwaba emabuthweni tank, kodwa ngenxa indoda enkulu ethangini wayengumuntu "eduze." Yingakho izinsuku zakhe nenkonzo yezempi, le nsizwa lesisetjentiswe lamabutho ukulungisa.
Ukusebenza yaseshashalazini yaqala ngokuvula ngeqhaza ukuthi umlingisi ngisho namuhla Angisanibizi ngokuthi. Kodwa okokuqala ukusebenza kwabo lapho umculi waya kwelinye izindima eziyinhloko, u-Arthur V ukhumbula kahle - lokhu ukukhiqizwa "Nambili uBusuku." By endleleni, manje u-Arthur Waha, isithombe okuyinto kungabonwa amaphosta yamakhonsathi ezahlukene kuleli kulungiselelwa kakade usuthandana, futhi ujabule ngakho. Lo mlingisi uthi njalo waya endaweni yesehlakalo, uzama ukuletha isithombe umlingisi into entsha yokuvusa isithakazelo umbukeli - ukusebenza efanayo akukwazi okufanayo. Futhi njengoba ukukhiqizwa "nambili Night" isivele ngempela "omdala" - enendawo engaphezu kweyishumi - ke beveza into kusengaphambili isiba babulawa.
Phakathi ukusebenza we State Academic Theatre of Comedy, abasebenzi Arthur Viktorovich, kungaba ukusebenza ovelele: "The Passion of Moliere," "cherry yami engadini", "Izwe Umfazi".
Namuhla, u-Artur Viktorovich Vaha - umculi ezizimele. Alikwazi inkampani yanoma yiziphi yeshashalazi, futhi bahlanganyele ukusebenza kuphela ngesisekelo nezivumelwano. Futhi, musa ukufihla imizwa, ihlukaniswe, wathokoza kakhulu ifomu enjalo wokubambisana ngoba ithuba elikhulu ukhetha iqhaza ukusebenza komphakathi kanye ngawo abaqondisi basebenzisane. Ngaphandle sidlala ngesikhathi State Academic Theatre yaqanjwa Akimov Comedy, umlingisi uhlanganyela yaseshashalazini imikhiqizo Shelter osomahlaya - "Bon appétit !!!"; Theatre abaqalise "farce" - "I-Village of Stepanchikovo". Have Wahi futhi asebenze RGABDT Tovstonogov - umlingisi udlala play "Amakhono kanye abayithandayo", futhi enkundleni yemidlalo yase-Leningrad City Council - e imikhiqizo ye "Uzungu Ngemizwa," "Sanctuary" nabanye.
Ukudubula movie - kuyingxenye ebalulekile kulo mkhakha, okwakuthatha Arthur Waha. amabhayisikobho akhe kuyabonakala namuhla eziteshini eziningi TV yezwe. Phakathi imidwebo, lo omthandayo kakhulu izilaleli, kungenzeka ukwaba ifilimu serial "Breathe nami," lapho umlingisi kudlalwa uhlamvu omuhle kakhulu - usomabhizinisi Vadim. Esikhathini uchungechunge "ukukhulelwa test" Arthur Viktorovich sebedlale Samoryadova imitholampilo ikhanda udokotela. Esikhathini ukuthusa movie zomlando "Batalon" Vahe got a encane kodwa kakhulu nobuntu indima KwamaBolshevik isosha. Nokho, izindima ezinkulu ngesikhathi u-Arthur Viktorovich cha. Isimanga siwukuthi kodwa umlingisi ukuba anake ngalokhu. Uthi noma yimuphi umsebenzi - kungcono umsebenzi kanye professional uyokwenza qualitatively, kungakhathaliseki - imitha ngokugcwele noma i-movie ye-serial, Starring, noma isiqephu.
On top of ukuthi umlingisi sibizwa ngokuthi Waha, futhi mangisho, umlando wakhe eziningi amabhayisikobho awakholelwa. Phakathi kwabo: "Ubuso", "Tarzan," "Gangster Petersburg. nciphisa umuntu ngemithi elwa namagciwane, "" Terminator 3: Rise of the Machines, "" The Legend of Zorro "nabanye.
ukuphila Siqu Artura Vahi namuhla - ngesihloko evulekile. Lo mlingisi uyavuma ukuthi umsebenzi wakhe somphakathi yabakhanga abesifazane, Nokho, ngokuphambene nenkolelo evamile iningi, umculi akusho njengesisulu heartthrob, iphula isiphetho zabesifazane. Akaguquki nabangane bakhe ezifana amagilavu, musa ukuqoqa umhlangano nabo.
Ahambisana Naleli umlingisi Ukuchitheka komshado nomuntu asebenza naye phansi esitolo. Unkosikazi Artura Vahi - yaseshashalazini kanye ifilimu actress Irina Tsvetkova. indodakazi Ushadile Maria ezalelwa abalingisi, okuyinto, by the way, usephendukele ezinyathelweni inkanyezi yayo umzali. Nokho, umndeni athuthukile Wahi. Artur futhi Irina behlukene, kodwa agcinwayo nobuhlobo obuvamile nabantu. Imibuzo mayelana ukulungela ukudala entsha Arthur V izimpendulo umndeni evasively. Lo mlingisi alikwenqabeli ukuphuza kwakungenzeka lokhu, kodwa ikakhulukazi akazange athathe izinyathelo lokhu.
Namuhla, u-Artur Viktorovich Vaha uhlala ukuzijabulisa. Yena umatasa ngesikhathi sakhe sokuphumula wahlanganyela umculo. Umlingisi kwakhiwa zakhe zomculo rock band, okuyinto ethatha njengoba soloist - ngezimpelasonto the "gang" lonke libuthene ndawonye. Abesilisa ukubukeza, ukukhuluma, futhi ijabulela ukuphila. Ngaphezu umculo, Waha unesithakazelo izithuthuthu, kuzuba nge-parachute, diving. Ngelilodwa nje, yena ekstremal.
Yaseshashalazini, iqhawe lethu ufuna ukudlala King Lear-movie ngeke obunye indima ezithakazelisayo big. Kodwa kuphela ubumnandi zabo siqu, hhayi udumo.
On umbuzo impumelelo okudala Artur Viktorovich Vaha, ngaphandle kokunqikaza, waphendula ngokuthi waqaphela ezingaba% walo 20 kuphela. Lokhu kusho ukuthi umculi kusekhona eziningi izinhlelo. Yena akayekanga ukuphupha, futhi ukuphila usaqhubeka mangaza kuye.
Nina Usatova - Filmography actress nomndeni
Philips HQ 6927 - wethuka woma rotary
Izibuyekezo nabanikazi, "Volvo XC90" (Volvo XC90), test drive Ukucaciswa
Kokufa impi esheshayo engahlomile kakhulu "Varyag" (kafushane). Usuku, umlando, indawo sokufa